Wararka - Habka Waxsoosaarka Graphene
1, Habka farsamada loogala baxo
Habka farsameynta farsamada ayaa ah qaab lagu helo qalabka graphene-lakabka khafiifka ah iyadoo la adeegsanayo isku dhaca iyo dhaqdhaqaaqa qaraabada u dhexeeya walxaha iyo graphene. Qaabku waa sahlan yahay in la shaqeeyo, graphene-ka la soo helayna wuxuu badanaa hayaa qaab-dhismeed dhammaystiran oo dhammaystiran. Sannadkii 2004, laba saynisyahano Ingiriis ah ayaa isticmaalay cajalad hufan si ay uga soo saaraan lakabka garaafka dabiiciga ah lakabka si ay u helaan graphene, kaas oo sidoo kale lagu sifeeyay hab farsameyn farsamo Habkan ayaa mar loo arkaa inuu yahay mid aan tayo laheyn oo aan awood u laheyn wax soo saar ballaaran.
Sanadihii la soo dhaafay, warshaduhu waxay sameeyeen cilmi baaris badan iyo hal-abuurnimo horumarineed oo ku saabsan hababka wax soo saarka ee graphene. Waqtigan xaadirka ah, shirkado dhowr ah oo ku yaal Xiamen, Guangdong iyo gobollada kale iyo magaalooyinka ayaa ka adkaaday cidhiidhiga wax soo saarka ee qiime jaban oo qiimo jaban oo diyaarin ah oo loo yaqaan 'graphene', iyada oo la adeegsanayo habka mashiinka looga jarayo si warshadeed loogu soo saaro graphene qiimo jaban iyo tayo sare leh.
2. Habka Redox
Habka loo yaqaan 'Oxidation-dhimista' ayaa ah in la okseysiiyo garaafka dabiiciga ah iyadoo la adeegsanayo reagents kiimiko ah sida sulfuric acid iyo nitric acid iyo oksaydhyaasha sida potassium permanganate iyo hydrogen peroxide, la kordhiyo kala dheereynta udhaxeysa lakabyada garaafyada, lana galiyo oksaydh inta udhaxeysa lakabyada garaafka si loo diyaariyo GraphiteOxide. Kadib, fal-celiyaha waxaa lagu maydhay biyo, qalabka adag ee la maydhayna waa lagu qalajiyey heerkulkiisu hooseeyo si loo diyaariyo garaafka xabagta budada ah. Oxyide oxide waxaa lagu diyaariyey iyadoo la xoqayo budada garaafka xabagta ee diirka jirka iyo fidinta heerkulka sare. Ugu dambeyntii, graphene oxide waxaa lagu yareeyay habka kiimikada si loo helo graphene (RGO). Habkani waa sahlan yahay in la shaqeeyo, oo leh wax soo saar sarreeya, laakiin tayada wax soo saarka oo hooseeya . Habka loo yaqaan 'Oxidation-dhimista' waxay isticmaashaa asiidhyo adag sida sulfuric acid iyo nitric acid, oo khatar ah una baahan biyo badan nadiifinta, taasoo keenta wasakheynta deegaanka ee weyn.
Graphene oo ay diyaariyeen habka loo yaqaan 'redox' waxaa ku jira kooxo firfircoon oo ay ku jiraan oksijiin waana sahlan tahay in wax laga beddelo. Si kastaba ha noqotee, markaad yareyneyso graphene oxide, way adag tahay in la xakameeyo oksijiinta ku jirta graphene ka dib dhimista, iyo graphene oxide ayaa si isdaba joog ah u hoos u dhigi doonta saameynta qorraxda, heerkulka sare ee gawaarida iyo waxyaabo kale oo dibedda ah, sidaa darteed tayada alaabada graphene oo lagu soo saaray habka redox inta badan waa mid aan iswaafaqsaneyn laga soo bilaabo dufcaddii, taas oo adkeyneysa in la xakameeyo tayada.
Waqtigaan la joogo, dad badan ayaa isku qalda fikradaha garaafka xabagta, 'graphene oxide' iyo 'graphene oxide'. Maaddada loo yaqaan 'Graphite oxide' waa bunni waana polymer ka mid ah garaafka iyo xabagta. Maaddada loo yaqaan 'Graphene oxide' waa badeecad lagu helo iyadoo lagu xoqayo garaafka oksaydhka illaa hal lakab, lakab labalaab ah ama lakab oligo ah, waxaana ku jira tiro badan oo ka kooban oksijiin leh, sidaa darteed graphene oxide waa mid aan tabin lahayn wuxuuna leeyahay sifooyin firfircoon, oo si joogto ah u yarayn doona oo ay sii daayaan gaasaska sida baaruud dioxide inta lagu jiro isticmaalka, gaar ahaan inta lagu jiro ka shaqeynta qalabka heerkulka sare. Badeecada ka dib yareynta graphene oxide waxaa loogu yeeri karaa graphene (yaraaday graphene oxide).
3. (silikoon carbide) SiC epitaxial
Habka loo yaqaan 'SiC epitaxial' waa in la baabi'iyo aaladaha silsilada ah ee ka fog alaabta iyo dib u habeynta atamka haray ee isugeynta is-urursiga ee faaruqinta sare iyo jawiga heerkulka sare, sidaasna lagu helo graphene oo ku saleysan SiC substrate. Graphene tayo sare leh ayaa lagu heli karaa qaabkan, laakiin qaabkani wuxuu u baahan yahay qalab sare.